सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगका कारण दूरसंचार कम्पनीहरुको आम्दानी घट्यो - Gokarna News from Nepal
शुक्रबार, मङि्सर ०६, २०७६
सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगका कारण दूरसंचार कम्पनीहरुको आम्दानी घट्यो
शुक्रबार, मङि्सर १४, २०७५ by Gokarna News
काठमाडौं– सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगले दूरसंचार कम्पनीहरुको आम्दानी घटेको छ। देशका प्रमुख दूरसंचार कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलको आयमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
सामाजिक संजालको प्रयोग तुलनात्मक रुपमा सस्तो हुँदा सोमार्फत सन्देश र कल आदानप्रदान बढ्दै गएको छ। जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कलवापतको आम्दानी घटेको छ।
केही वर्ष अघिसम्म टेलिकम कम्पनीहरुको कुल आयमा ४० प्रतिशत भन्दा बढीको योगदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कलको योगदान हाल घटेर ३० प्रतिशत भन्दा कम भईसकेको छ। यसले कम्पनीहरुको आय घटाउनुका साथै देशले दूरसञ्चार क्षेत्रबाट गर्ने वैदेशिक मुद्रा आर्जन तथा सरकारले पाउने राजश्वमा समेत असर परेको छ।
सामाजिक संजालको बढ्दो प्रयोगले दूरसंचार कम्पनीहरुको डाटावापतको आम्दानी भने बढेको छ। एनसेलको डाटा आम्दानी बढे पनि समग्र आम्दानी घटेको हो। एनसेलको प्रमुख लगानीकर्ता कम्पनी आजियाटाले हालै सार्वजनिक गरेको २०१८ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीको इन्टरनेट आय बढे पनि कुल आयमा ह्रास आएको हो।
एनसेलले २०१८ को तेस्रो त्रैमासमा कुल १४ अर्ब १२ करोड आम्दानी गरेको छ। गत वर्ष तेस्रो त्रैमासिकमा एनसेलको कुल आम्दानी १४ अर्ब ५७ करोड थियो। सामाजिक संजालको प्रयोगमा डाटाको प्रयोग अत्याधिक हुँदा सोवापतको आय बढेको कम्पनीले जनाएको छ।
२०१७ को तेस्रो त्रैमासिकमा कुल आयमा डाटाको योगदान २० प्रतिशत रहेकोमा अहिलेको तेस्रो त्रैमासमा २४ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एनसेल मात्रै नभई नेपाल टेलिकमको दूरसंचार सेवावापतको आम्दानी समेत घटेको छ। टेलिकमले आफ्नो सेवावापत यस आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा ९ अर्ब ४९ करोड आम्दानी गरेको छ। गत वर्षको सो अवधिमा यस्तो आम्दानी १० अर्ब ५८ करोड थियो।
भाइबर, फेसबुक म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, इमो, स्काइप लगायतका ओटिटी सेवाको प्रयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय तथा लोकल कल गर्ने क्रम बढ्नाले आम्दानीमा असर परेको सेवा प्रदायकहरुले बताउँदै आएका छन्।
अवैध जग्गा प्लटिङले पर्यटकिय क्षेत्र तारेभिर पहिरोको उच्च जोखिममा,नगरपालिका बेखवर,जग्गा धनी भन्छन् ‘वैना लियौं जग्गा पास छैन’
के उठ्ला त साँखुको साख ?
नेकपा दक्षिणकाली नगर कमिटीले पायो पूर्णता
शान्ती पार्कको सपनाले सार्थकता पाउँदै छ : नेतृ खतिवडा
बूढानीलकण्ठमा शुक्रबार बिदा
२५ जुवाडे पक्राउ, दुई करोड ६७ लाख बरामद
आइफोन प्रयोगकर्तालाई दुःख दिँदै फेसबुक भाइरस
तल्लो डोल्पामा दुई महिनापछि मोबाइल टावर सञ्चालन, डाँडापाखा र सुरीला रुख चढ्नुपर्ने बाध्यता हट्यो
यसरी राख्नुहोस वाइफाईको पासवर्ड सुरक्षित
कालीगण्डकी माथिको भीरमा बनाएको पिङ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल
ओलीको राष्ट्रवाद चुनाव जित्ने खोल मात्रै,कालापानीमा पुगेर लम्पसारवादमा परिणत
ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड : नयाँ ट्याक्सी १२ सय सीसीको हुनुपर्ने, एसी र जिपिएस अनिवार्य
सिराहाका मालपोत प्रमुख ५ लाख घुससहित पक्राउ
ओलम्पिक टर्च र्‍याली स्वयम्भूबाट सुरु
झुलाघाट नाका आजदेखि बन्द
टी १० लिगमा पारस र सन्दीपको टिम भिड्दै
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अर्को विदेशी एयरलाइन्स थपियो,हप्तामा ४ उडान गर्ने
शक्ति राष्ट्रका प्रमुखहरुको नेपालप्रती चासो बढ्दो,रूसी राष्ट्रपति पुटिन नेपाल आउँदै
महराले दिएको निवेदन आज इजलासमा पेश हुने
मन्त्री र सचिवहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पनि घूस दिनुपर्छ भन्ने गरेको सुनेँ : प्रम ओली
नवनियुत्त मन्त्रीहरुसँगको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कालापानीबारे प्रधानमन्त्रीको यस्तो ब्रिफिङ
टी १० लिग : सन्दीप आवद्ध टिम टसकर्स ३२ रनले पराजित
‘इन्डियन आइडल’ बाट निकालिए अनु मलिक
भारतले दोहोर्‍यायो नेपालको सीमा नमिचिएको दाबी,सीमा विवादका सम्बन्धमा नेपालको तर्फबाट औपचारिक पत्र पनि आएको छैन’
गोकर्ण न्युज मासिक पत्रिका
टी यन धमला
गोकर्ण न्युज अन लाईन टिभी
Copyright 2016 - 2019 Gokarna News. All Right Reserved.